फोनबाट केटी पट्याएर चिकेको कथा
​नमस्कार! यौन प्रेमी साथि सबैलाई । मेरो घर बुटवल हो र म २५ वर्ष को युवक हुँ । आज एउटा गलत नंबरमा फोन लाग्दा के के हुन्छ म तपाईंलाई भन्न गइरहेको छु ।
कुरा त्यस दिन को हो जुन बेला कलर आई डी नयाँ नयाँ आएको थियो । एक दिन मैले साझको ४ बजे एक ट्राभल एजेंटको मा फोन गरेँ । गल्तीले त्यो फोन अरु नै घरमा पुगेछ र एउटा केटीले उठाएर “हेल्लो” भनि र मैले सोधें – यो ट्राभल ऐजेन्सी हो ? र उसले भनि ‘होइन’ अनि फोन राखी ।
म कुमार नै छु त्यसैले म प्राय चिक्न चिक्ने कुरा निकाल्ने बित्तिकै एकदमै उत्तेजित हुन्छु र चिक्न पाए हुन्थ्यो भनेर प्रबल इच्छा राख्छु । मलाई त्यस केटिलाई पट्याएर चिक्न मन लाग्यो अनि मैले आफ्नो कलर आई डीमा नम्बर हेरें अनि फेरी डायल गरेँ । फेरी त्यहि केटीले बोलिन्, अनि मैले भनें गलत नंम्बर भएर पनि म तिमी सित बोल्न चाहन्छु । अनि केटीले भनि – पर्दैन बोल्नलाई! भनेर फोन राख्न लागी । मैले भनें – तिम्रो आवाज एकदमै राम्रो छ । म तिमी सित एक छिन कुरा गर्छु अनि कहिले पनि फेरी तिमीलाई डिस्टर्ब गर्दिन भनेर भने । उसले – भन के भन्न चाहन्छौ भनि ।
मैले भनें मलाई तिम्रो आवज एकदमै राम्रो लाग्यो त्यसैले म तिमी सित ‘फ्रेन्डसिप’ गर्न चाहन्छु । अनि उसले भनि तपाईंले फेरी मेरो नंम्बर कसरी लगाउनु भयो नि ? मैले भनें रिडयलको बटनलाई थिचेर नि । यसरी केहि बेर कुरा हुँदै गयो । साच्चै नै उसको आवाज राम्रो र सेक्सी थियो, जुन आवाजलाई सुन्दा मेरो लाडो ठन्किदै गएको थियो । यसरी कुरै कुरामा उसले म BBS पढ्दै गरेको बताई र उसको बिहेको कुरा घरमा चल्दै गरेको बताई । फेरी उसले भनि – मेरो बुवा अफिसबाट आउन लाग्नु भयो म फोन राख्छु ।” मैले हतारमा भनें – तिम्रो नंम्बर त भन । उसले भन्दिन म भनिन । त्यसो भए मेरो नंम्बर सुन न त । अनि उसले भनि हुन्छ तर कुनै फाईदा छैन भनेर भनि । यसरी दुई तीन दिन बितिसको थियो र म उसको फोन आउने प्रतिक्षामा बसिनै राखेँ । उसको फोन कहिले आउला भनेर उकुसुमुकुस हुँदै बसेको थिएँ । एकदिन उसको मिसकल आयो र मैले उसलाई फोन गरिन ता कि उसले थाहा नपाओस कि म सित उसको नंम्बर छ भनेर । यसरी दुई तीन चोटी मिसकल आयो र मैले उसलाई फोन लगाएर भनेँ – कस्तो मुस्किलले फोन लाग्यो, मैले धेरैनै नम्बर ट्राई गरेँ जुन तिम्रोसित मिल्दो जुल्दो थियो । मैले थाहा पाइसकेको थिएँ कि उसलाई म सित कुरा गर्न मन छ । अनि मलाई तिम्रो धेरै याद आइराखेको छ । तिम्रो आवाज नसुन्दा कस्तो कस्तो भयो भनेँ । अब त नंम्बर भन यसरी बल्ल बल्ल उसले आफ्नो नम्बर भनि अनि बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो कुराकानी बढ्न थाल्यो । एक दिन राती मैले फोन गरेर उसलाई भने कि मेरो लाडो कस्तो ठुलो भएको छ । मलाई मिठो किस् गरन । यो कुरा सुनेर उ एक छिन त अक्मक परी र भनिन् – भोली दिउसो कुरा गरुम है । अनि मैले भने होइन मलाई अहिले मेरो माल निकाल्नु छ । उसले भनि कोही आयोभने मलाई कराउछ । मैले भने त्यसो भए मलाई भोलीको लागी प्रोमिस गर कि मलाई भेट्छौं । उनी मानी र हामीले कहाँ भेट्ने भनेर ठाउँ चुज गरेउँ ।
म ठीक समयमा नै पुगेँ । जसरी उसले मलाई भनेको थियो कि – म आकाशे कलरको लुगा लगाएर आउछु भनेर । मैले उसलाई चिने र हामी एक साईबरमा गएर बसेउँ । केटी हेर्दा ठीक ठाक को नै थियो । फिगर त झन् गजबको थियो । ठुलो ठुलो दुध्, ठुला ठुला कन्डो हेर्दा लाग्थ्यो कि बिहेको लागि एकदम तयार भएको छ भनेर । केहिछिन हामीले कुराकानी गरेउँ र मैले इन्टरनेटमा पोर्न साईट खोलिदिएँ । यो सब देखेर उसलाई पनि मज्जा आएको हुनुपर्छ । उसको अनुहार पुरै लजाएको र पसिना पसिना भएको थियो । यसरी मैले सिधै उसको ओठमा किस् गरेँ र एक हातले दुधलाई दबाउन सुरु गरेँ । ऊ काप्न थाली र पुरै पसिना पसिना हुन थाली । मैले साईबरमा राखेको क्याबिनको पंखा चलाएँ अनि बिस्तारै बिस्तारै उसको कपडा खोलिदिएँ । ढिला नगरी, हतार हतार उसको पुतीमा मेरो औंला राखेर पुतिलाई खेलाउन थालें । उसलाई पनि मजा आएको हुनुपर्छ । उसको दुवै आखाँ बन्द थियो । मेरो औंला पुतीमै थियो । पुतीबाट पानी आउन थालेको मैले महसुस गरेँ ।
हतार हतारमा मैले उसको टि-सर्ट माथि उठाएँ र दुधलाई मेरो ओठले मज्जाले चुस्न थालें । मैले उसको टाइट पेन्टलाई पुरै खोलेर तलसम्म सारें र पुतिलाई चुस्न थालेँ । म उसको त्यो हालत हेर्दै थिएँ र उसले पनि बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो हात मेरो काँधमा दह्रोसंग समात्दै थिई । साथै आफ्नो कन्डो अगाडी पछाडी गर्दै थिइन । मैले आफ्नो चेन खोलेर लाडोलाई बाहिर निकाले । मैले उसको हाथमा मेरो लाडो राखेँ । सायद उसको यो पहिलो सेक्स थियो होला र हामी पुरा त्यसमा डुबेका थियौं ।
यसरी मलाई खपी नसक्नु भयो र म कुर्सीमा बसें । उसलाई मेरो माथि राखेँ र पछाडीबाट मेरो ८ इन्चको लाडो उसको पुतीमा ल्वाम्मै हालें । उनी ऐया… ऐया… दुख्यो भनेर कराई । अरुले सुन्छ कि भन्ठानेर किस गर्दै उसको मुख थुन्नामा व्यस्त भएँ र लाँडोले पुतीमा सोझ्याउँदै थिएँ । उसको पानि धेरै आएको हुनाले अलि गाह्रो गाह्रो भइकन पनि मेरो लाडो उसको पुतीमा अटायो । यसरी मैले उसको पुतीमा हाल्दा मेरो लाडो त स्वर्गमा पुगेको जस्तो भयो र मनले एक प्रकारको अर्कै अनुभुती गर्दै थियो । उ पनि एक तर्फबाट मज्जा लिदै थिइन् । मैले उसको पुतीभित्र मेरो लाडो धेरै बेर राख्न सकिन र मेरो माल भित्रनै झर्यो । मेरो माल उसको पुतीमा झर्दा उनि आफ्नो शरिरलाई मजाले बटारिन सायद उनलाई एकदम मजा आएको हुनुपर्छ । हामी दुवै जना मजा मान्दै सम्हालिएर उठेउँ र आफ्नो आफ्नो घर तिर लागेउँ ।
यसरी आज पुरा ३ वर्ष भयो हाम्रो पहिलो चिकामारी भएको त्यो पनि साईबरमा । उ अहिले पिएचडी गर्दै छिन र उसलाई बिहे पनि गर्न मन छैन । न त हाम्रो कुनै सम्बन्ध नै छ । तर पनि हामी हरेक हप्ता दुई देखी तीन चोटी विभिन्न ठाउँमा घुम्दै चिक्ने काम गर्छौ । अब त हामी दुवै चिक्नामा धेरै सिपालु भएका छौं । उनिलाई चिक्दा चिक्दा, बिहे नगरे पनि मेरो समय बिहेको जस्तो भएको थियो । जती खेर मन लाग्यो त्यति खेर हामी चिक्ने काम गर्थेउ । उसलाई पनि चिक्न मन लागेको बेला मलाई फोन गर्थि । एक दिन त म लुकी लुकी उसको रुममा गएर रात भरी चिकेको छु । कहिले कही परिक्षा दिन अर्को ठाउँमा जादाँ म पनि गएको छु । होटेलको एउटै कोठामा श्रीमान र श्रीमती जस्तै गरी बसेर धेरै चोटी ब्लू फिल्म हेर्दै विभिन्न स्टाईल स्टाईलमा मैले धेरै पटक उनलाई चिकेको छु । यसरी उनीसंग अहिले पनि जस्ताको तस्तै सम्बन्ध छ – चिकामारिको । लागेको बानि कहाँ पो जान्छा र भर्खरैको १ बर्षमै ५-६ केटीहरुलाई यसरीनै पटयाएर चिक्दै छु ।
साथी हो – विश्वास मान्नु या नमान्नु, चाहे त्यो केटा होस या केटी, सबैलाई नयाँ माल राम्रो लाग्छ । सबैलाई सेक्स गर्न मन लाग्छ । हतार हतार नगरौं, पहिले बिस्तारै बिस्तारै फसाउनुस अनि पछि जालमा परेपछि मज्जाले चिक्नुहोस् ।
फोनबाट केटी पट्याएर चिकेको कथा 2017-05-12T09:34:00+05:45 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Miracle Teen Team
Miracle Nepal - Multilingual Sex Story Website: फोनबाट केटी पट्याएर चिकेको कथा